बलिउड चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले गरे आत्महत्या "मोदी सम्म चकित" !!!
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले मुम्बईस्थित आफ्नो फ्ल्याटमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । ३४ वर्षीय सुशान्तले किन आत्महत्या गरे भन्ने अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।
घरका कामदारले प्रहरीलाई बताए अनुसार उनी हिजोदेखि निकै तनावमा थिए । ती कामदारका अनुसार बिहान ढिलोसम्म ढोका नखोलेपछि अर्को चाबीले मेन गेट खोलेर भित्र प्रवेश गरेका थिए । भित्र सुशान्तको शव पंखामा झुण्डिरहेको अवस्थामा उनले फेला पारेका थिए । केही समयअघि मात्र बलिउडका दिग्गज कलाकार इरफान खानर र ऋषि कपूरलाई गुमाएको बलिउड इन्डष्ट्रिले फेरि एउटा होनाहार अभिनेता गुमाएको छ ।
सुशान्तको मृत्युपछि बलिउड इन्डष्ट्रि अहिले शोकमा छ । यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सुशान्तको मृत्युमा दुःख व्यक्त गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै मोदीले एक होनाहार अभिनेता छिट्टै बिदा भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । मनोरञ्जनको दुनियामा उनको उदयले धेरैलाई प्रेरित गरेको उनले बताएका छन् ।
सुशान्त निकै क्षमतावान अभिनेता थिए । भगवानले उनको परिवारलाई यो दुःख सहन सक्ने शक्ति देओस् । –अक्षय कुमार, अभिनेता
सुशान्त मेरो निकै नजिकका र राम्रा साथी थिए । जे घटना भयो मैले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । -नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अभिनेता
डिप्रेसन सबैभन्दा ठूलो महामारी हो । –उर्वशी रौतेला, अभिनेत्री
सुशान्तको मृत्युको खबरले निकै दुःखी छु, भगवानले परिवारलाई धैर्यधारण गर्ने शक्ति देओस् । –अजय देवगन, अभिनेता
धोनीको बायोपिक फिल्म ‘एमएस धोनी’मा सुशान्तसँगै काम गरेका आलोक पाण्डेका अनुसार सुशान्तले आत्महत्या गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । एजेन्सी
One thought on “बलिउड चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले गरे आत्महत्या “मोदी सम्म चकित” !!!”
Pingback: मर्नु भन्दा आगाडी सुशान्तले अन्तिम पोस्ट आफ्नी आमाको लागि लेखेका थिए